Shina: Sondro-bidy sy zaridaina an-tafontrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2010 6:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, 한국어, Italiano, বাংলা, македонски, srpski, Español, русский, English
[Rohy amin'ny teny Anglisy raha tsy misy fanamarihana manokana]
Taorian'ny vaovao milaza sondrom-bidy tao Shina sy ny hoe mandingana sisintany ireo mpivarotra ao Shenzhen mba ho any Hong Kong hividy entana amin'ny sandany mora, dia misy tranga hafa tsy fahita entin'i CS Yilao, mpitoraka bilaogy an-tsary ao amin'ny NetEase, ao Shenzhen [teny Sinoa], izay mahita ny olona manao fitsitsiana ara-bola amin'ny fambolena ny zavatra ilain-dry zareo eny ambony tafo:
Miaraka amin'ny vidin-javatra nidangana be izay tsy izy tato ho ato tao Shenzhen, ary koa ny fitotonganana tsy miaton'ny vola dollar ao Kong Kong mitaha amin'ny yuan, dia mandeha mankany Hong Kong mba hividy izay filàny isanandro ny sasany amin'ireo mponina ao Shenzhen. Ndeha isika hampitaha ny elanelam-bidy eo amin'ireny filàna isanandro ireny ao Hong Kong sy Shenzhen: ao Shenzhen, ny sira fampiasa ao an-dakozia dia amidy RMB 2 ny iray fonosana, nefa any amin'ireo fivarotana lehibe any Hong Kong dia HKD 1.1, izay eo amin'ny RMB 0.90 eo monja; ny paoma Fuji iray ao Shenzhen dia efa tonga hatramin'ny RMB 12/kilao, na RMB 4 isaky singam-paoma iray, nefa afaka mivanga paoma 4 mitovy amin'izay any Hong Kong amin'ny sanda HKD 10. Ny vidin'ny atody iray ao Shenzhen dia tafakatra ho RMB 0.90, nefa any amin'ny toeram-pivarotana lehibe Wellcome ao Hong Kong, atody mihoatra ny 30 na latsaka kely tsy mifankaiza amin'ny haben'ireo no vidiana amin'ny HKD 23 monja, na latsaky ny RMB 0.7 isaky ny atody. Taratasy fidiovana ‘Vinda’ miisa folo any amin'ny toeram-pivarotana lehibe ao Shenzhen dia vidiana RMB 32.50, raha HKD 28 any amin'ireo toeram-pivarotana lehibe any Hong Kong ; tavoahangina shampoo Rejoice 750 ml iray misànda RMB 39 any amin'ireo toeram-pivarotana lehibe ao Shenzhen, nefa any Hong Kong afaka mahazo tavoahangy roa ianao amin'ny HKD 61…
Tato ho ato, noho ny fiakaran'ny vidin-javatra tao Shenzhen, RMB 9/kilaon'ny legioma na aiza na aiza, ary mety mihoatra an'izany. Ho an'ireo mpiasa maro avy any amin'ny faritany toa anay ao Shenzhen, tsy afaka mahazo fahafahana mivezivezy mora foana hankany Hong Kong toy ireo mponina voasoratra mazava avy ao Shenzhen izahay Tsy afaka mihoatra ny sisintany handeha hiantsena any Hong Kong izahay, nefa mba misy ihany fomba azo atao hialàna amin'izany: ny tafontranonay. Na eo aza izany, fantiantoka toy inona moa ny ho famelàna ireny faritra malalaka be sy azon-drivotra tsara ireny hitoetra tsy ampiasaina. Mila herin-tsandry kely fotsiny sy tany, dia manana ny toeram-pambolena keliny ny tsirairay. Izahay ihany no mioty azy ary dia mba mahangona izay sahaza hohanina ihany. Raha tsy hoe arodan-dry zareo ireo trano avo ipetrahanay, dia ho azonay atao ny manohy mamboly toy izao.
Indray maraina ilay izaho vao nifoaha iny ka nankeo amin'ny lavarangana dia nahatsikaritra zavatra teny ambonin'ireo tafontrano manodidina ahy. Nandray ny masolavitro aho ary nijery tsara ny manodidina, avy eo aho nahatsikaritra fa hay zaridaina eny ambony tafo ireo tazako.
Zaridaina isaky ny zoron-trano; eto izao ity tompon-trano ity dia manondraka ny voliny.
Ireto mpifanolo-bodirindrina ireto dia sahala amin'ny hoe mifanakalo traikefa mikasika ny fomba fambolena
Samy manana ny zara taniny ny tsirairay ary mifanampy, manome sy mandray.
Eto indray dia nakisaka ireo tavy ary efa vonona ny ho ampiasaina indray.
Mampiasa ny teknolojian'ny tranomaitso koa ry zareo (Serres)
Tena tsara fiomanana ireto olona ireto, nampakariny daholo izay fitaovana rehetra ilaina amin'ny fanorenana. Sahala amin'ny hoe eo mihitsy ry zareo no honina